Wefdiga uu hogaaminayo Mark Bowden oo soo gaaray magaalada Boosaaso
July 11, 2012 - Written by Boosaaso:-Waxaa saaka soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari Mark Bowden oo ah xiriiriyaha Qaramada Midoobey u qaabilsan dhinac gargaarka bini aadminimada ee dalka Soomaaliya. Wefdiga uu hogaaminayo Mark Bowden ayaa waxa ku soo dhaweeyey magaalada Boosaaso Guddoomiyaha Gobolka Bari , wasiiro ka tirsan xukuumada Puntlland, Xilibaano , Saraakiil ka tirsan ciidanka Puntlland iyo ganacsato.
Masuuliyiinta Gobolka Bari iyo wasiirada ka tirsan xukuumada Puntlland ayaa kulan gaar ah la qaatay wafdiga Mark Bowden waxaan ay markii kulanka uu u dhamaaday ay safar ku tageen xerooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah eek u yaal magaalada Boosaaso.
Wefdiga Mark Bowden ayaa maalintii shalay waxaa ay safar ku yimaadeen magaalada Garoowe oo ah xarunta Puntlland waxaan ay kulan la qaateen madaxeyunaha Puntlland Dr. C/raxmaan Faroole iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntlland Jen Cabdisamad Cali Shire iyo wasiiro ka tirsan Golaha xukuumada Puntlland.
Ma ah markii ugu horaysay oo uu wafdi uu hogaaminayo xiriiriyaha Qaramada Midoobey u qaabil san dhinac gargaarka bini aadminimada ee Soomaaliya Mark Bowden safar ku soo gaaro Puntlland.